Ny foko Ndebele dia manana fomba tsara fanasaziana ireo izay manao zavatra ratsy - AFRIKHEPRI
ny sabotsy 6 aprily 2020
Tranok'alan'ny Filozofy Sinoa (PDF)
Tranom-pampandrosoana ho an'ny tena manokana (PDF)
Fitehirizam-boky momba ny asan'ny maizina sy ny esotericism (PDF)
Fampianarana an-tsekoly amin'ny vanim-potoana vaovao (PDF)
Tag Tags trending
Siansa sy fiainana: fahasalamana
Ny afrikana fandrarana amin'ny fihinanana kisoa
Ny fandinihana Rosiana dia manaporofo fa hanalefaka ny olombelona ny GMO aorian'ny taranaka 3
Acai berry ho an'ny lanja sy miaro amin'ny aretim-po sy diabeta
Tontolo tsy misy kansera, ny tantaran'ny otrikaina B17 (PDF)
Ny fahefana amin'izao fotoana izao - Eckhart Tolle (PDF)
Ny lalànan'ny seza-tsosialy - Annie Besant (PDF)
Chakras, foiben'ny hery eo amin'ny olombelona - Leadbeater (PDF)
Ny fototry ny filozofa esoterika - Blavatsky (PDF)
MOVIE MBOLA TORO
Hijery ny fampakaram-bady ny taona (2014)
Jereo ny ranomasoman'ny Masoandro (2003)
Jereo mivantana Outta Compton (2015)
Watch Tsy hovonoinao (2016)
Mijery voalohany ny namonoany ny Raiko (2017)
Jereo ny tselatra mainty (2018)
Jereo ny Notorious BIG (2009)
Jereo ny rivo-doza Carter (2000)
Fanilo andriamanitra mainty
Miantehitra amin'ny tambajotra sosialy Afrikhepri
Fanaperana mainty tany Eoropa fahiny
Zarao ireo lahatsoratra handrisihana ny kolontsaina Afrikana
Tsy nisy olona nanjary nanandevo ny fanandevozana, tsy nisy olona voafidy, tsy nisy tany nampanantenaina an'Andriamanitra
AFURAKA / AFURAITKAIT - Ny niandohan'ny teny hoe "Africa
Ny heloka voalohany eto an-tany
Ny niandohan'ny fiteny Kilimanjaro
Sivila sivily ao India
I Apollonius avy any Tyana ve no Kristy "tena"?
Miverina amin'ny fiandohan'ny fahamarinana sy ny fitondran-tena: Maat
Fanazavana siantifika momba ny fanasitranana mahagaga sy ny herin'ny vavaka
Osho, mystika amin'izao fotoana izao izay mitondra ny fahendren'ny andro fahiny
Ny Baiboly, dika mitovy na fitohizan'ny lahatsoratra sumerianina?
ISIS: Niverina tany Ejipta fahiny ny fitsanganana amin'ny maty
Jesosy dia mainty sy afrikana an'ny rajako, hoy ny soratra vao hita vao haingana
Fanombohana ny mazia fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny Isis
Ny lupercales, ny niandohan'ny Saint-Valendin
Ny tarain'ny lehilahy mainty - Alain mabanckou
Tantara iray hafa - Claude Ribbe
Fivavahana Afrikana - Mbog Bassong (Boky)
Ubuntu: Ny kolontsain'ny fandriampahalemana any Afrika
Ny tantaran'ny andevo tsy hay hadino an'i Tromelin dia nilaza tamina resaka tantara an-tsary
Fisoratana anarana / LOGIN
NY VOISY KAMA
PHILOSOPY SY PSYCHOLOGY
Filozofia sy Psychologie momba ny fahasalamana sy ny fitsaboana
FAHASALAMANA SY MISTERY
TENY MATTHIEU GROBLI
MIARAKA / VAOVAO
Ny Fahamendrehana - Eckhart Tollé (Audio)
Ny herin'ny ambadikareo - Joseph Murphy (Audio)
Spirulina - Manatsara ny rafitra fiarovana anao
Sivilizasiona Negro-Afrikana nataon'i Profesora Coovi Gomez
Tsiambaratelo kanto ny sôkôla
Origine et histoire de «bogolan»
Soa azo avy amin'ny menaka cashew ho an'ny volo sy ny hoditra
Origine et histoire de perles en Afrique
Inona ireo fitsipika tsotra tokony hanajana ny fampiroboroboana ny asanao
Toy izao ny fomba hananana lavenona lavorary
Fa maninona ireo afrikana sy afrikanina-amerikana hatrany no "tsy mahatsiaro ho toy izany"?
Michael Jackson: fiainam-tantara iray - Rafitra fanadihadiana (2011)
Ny Herin'ny finiavana - Rakitra fanadihadiana
Faneken-tena - fanadihadiana
Kwame Nkrumah - Rakitra fanadihadiana (2017)
Indray mandeha, ny fanjakan'i Afrika - Rakitra fanadihadiana
Fananganana indray - Rakitra fanadihadiana (2018)
Aloavy amin'i Johnny Clegg, ilay zoloa fotsy (Video)
Mpinamana izahay - Rakitra fanadihadiana (2015)
Rahampitso - Rakitra fanadihadiana (2015)
Natomboka tamin'ny herin'aratra nokleary i Ghana ary nanomboka fandaharana habaka
Etazonia, demokrasia mampihatra ny fanamelohana ho faty?
Mosquirix, vakoka fanandramana amin'ny tazomoka (Malaria)
Ny zaza Ubongo, sary an-tsary Tanzaniana amin'ny fikarohana an'i Afrika
LOU JING: AFRO-CHINESE, MITARIKA AMIN'NY FIFIDIANANA TELEVIZIONA, ary MITADY NY FANARAHAN'NY RACISM AMIN'I CHINA
SKATE-BOARD SY FAHASALAMANA ANTSIKA AVY ANY AN-DANITRA, FIVORIANA TOMPOKO
Ny African Music Institute (AMI), sekoly mozika malaza iray manokatra ny varavarany ao Gabon
Senegaly dia nanangana tranombakoka lehibe indrindra amin'ireo sivilizasiona mainty
Ny fahazarana 7 amin'ireo izay mahatsapa ny zavatra rehetra ataony - Stephen Covey (Audio)
Ny niandohan'ny olombelona araka ny takelaka Sumerian - Fizarana 2 (Audio)
Ny lalànan'ny saina - Dan Millman (Audio)
Ny Bokin'ny Fanahy - Allan Kardec (Audio)
Ny niandohan'ny olombelona araka ny takelaka Sumerian - fizarana 1 (Audio)
Ny afon'ny fijerena - Jiddu Krishnamurti (Audio)
Ny fampianaran'i Ramana Maharshi (Audio)
Mampihatra ny herin'izao vanim-potoana izao - Eckhart Tolle (Audio)
Ny foko Ndebele dia manana fomba tsara hanasaziana ireo izay manao ratsy
in FAMPIANARANA BUSINESS
Ahoana ny fihetsikareo?
Naneho hevitra ianao "Ny foko Ndebele dia manana fomba tsara mahafinaritra ..." Sekondra vitsy lasa izay
Lfifandraisan'olombelona ao ny foko Ndebele Avy any Afrika Atsimo dia mahafinaritra. Rehefa misy ny mpikambana iray dia diso, tsy misy fitsarana ara-drariny, tsy misy sazy. Ny mpikambana ao amin'io foko io dia miaro azy amin'ny fomba hafa.
Ny lesona tsara amin'ny maha-olona an'ny foko Ndebele
Ny sivilizanay maoderina dia azo antoka fa misy lesona tsara amin'ny maha-olombelona - sy ny fanetren-tena - haka avy amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy. Indrindra ao amin'ny foko Ndebele.
Na izany aza dia tiantsika ny mino fa anisan'ny "fiarahamonina mandala sivilizasiona" isika. Famaranana ny tantaran'ny olombelona izay safidy tsara indrindra.
Na izany aza, ireo vondrom-piarahamonina hafa manerana an'izao tontolo izao dia manana asa sosialy izay mety tsy mitovy amin'ny antsika. Tsy tsara ve izy ireo?
Tsy misy sazy amin'ny foko Ndebele
Ao Ndebele, Afrika Atsimo foko, rehefa misy olona manao fahadisoana, izy diso: fiaraha-monina ny mpikambana hafa rehefa miaraka amin'ny maha-olombelona, ​​izay afaka toa saro-takarina ho an'ny Tandrefana maso.Ny fahatsapana ny maha-olombelona dia avy amin'ity olona ity
Handritra ny roa andro dia hanodidina ny "mampalahelo" izy ireo ary hiresaka aminy ny zavatra lehibe sy mahafinaritra rehetra nataony tamin'ny lasa. Amin'izay dia ho sarobidy araka izay tratra ny foto-kevitra tsy mety. Amin'izany fomba izany dia avelany haverina amin'ny toetrany marina izy ary hamerenana ny vondrona. Tsy ilaina ny sazy. Ny fametahana indray dia avy hatrany.
Ao amin'ny foko Ndebele, ny finoana fa ny olombelona dia tsara amin'ny natiora ary ny fikatsahana ny filaminana, ny fitiavana, ny fiadanana ary ny fahasambarana dia azo antoka. Ao anatin'ity fikarohana ity dia mety hisy fahadisoana manokana, saingy ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina dia miantoka fa tsy mandeha ny iray hafa.
Miaraka aminay: famaizana sy fameperana ny fahalalahana izany
Ny fiheverana sy ny asa tsara ataon'ilay vondrom-piarahamonin'i Ndebele dia mampiseho fa tsy misy fiantraikany amin'ny asantsika ny tsy fahombiazantsika. Ahoana anefa no ahafahantsika manokana fotoana sy hery ilaina? Tena voafetra ny fotoana iainantsika, ny fomba fiainan'ny mpamokatra mpamokatra-endri-tsoratra dia tanteraka tanteraka amin'ny tompony: ny vola.
Ny Ndebele dia mikasa ny handanjalanja ny fandikan-dalàna fa tsy hanasazy azy. Miaraka aminay ny sazy, araka ny lalàna.
Ny olombelona no voalohany sy ambony
Ahoana no ahafahantsika manantena fa indray andro any, fiovàna goavana eo amin'ny fiarahamonina mandinika ny olona alohan'ny hahazoany tombony any an-trano?
Lasa mpitantana vola ara-bola ny mpanao politika, raha toa ka azo atao izany asa izany - ary na dia tsaratsara kokoa aza - amin'ny alàlan'ny kaonty mpanao banky. Tsia, aza manantena zavatra avy amin'izy ireo. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny sivilizasiona "maoderina" toy ny antsika, ary ny fiasan'ny fikambanana antsoina hoe "tsy ampy taona", dia mitoetra ao amin'io lafiny manan-danja io: ny fifandraisana amin'ny vola.
Ny fiarahamonina maoderina dia mivadika ho vola
Ny fiarahamonintsika dia mitodika amin'ny vola, harena ary fahefana. Ny olona dia manadino ny filàn'izy ireo hananana bebe kokoa, hamokatra bebe kokoa ary handany bebe kokoa. Tahaka ny hoe ny saintsika sy ny fitsipi-pitondrantenantsika dia somary mendri-kaja fa isika dia amin'ny vatantsika fanahy sy ny fanahy ho an'ny fandrosoana ara-toekarena.
Ny fiantraikan'ny Ndebele amin'ny Tandrefana ...
Fahamarinana amin'ny fomba "fanantenana"
Ao an-trano, ilay meloka dia meloka sy sazina, miaraka amin'ny fanantenana fa ny faneriterena ny fahalalahana omena dia mamela azy hiova. Ao anatin'ny fanantenana no anaovana ny rariny. Na izany na tsy izany, dia tsy dia misy loatra ny vola sy ny loharanom-piraketan'ny olombelona raha tsy misy izany.
Na dia izany aza, ny famehezana ny fahalalahana, ny fanalàm-pahefana vonjimaika ny zo fototry ny olona dia tsy manana ny fiantraikany. Maro no manonona. Angamba ny fiarahamonintsika dia tokony hijery ity olana ity: ny fahamarinana dia manome ny fitsarana izay fantany fa tsy mahomby.
Fanasaziana izay manana ny anarana ihany
Ny fanasaziana izay fantatsika mialoha tsy mahomby - na kely loatra - dia lasa tahaka ny fampijaliana noho ny zavatra hafa rehetra. Izany na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba fitsaboana ratsy no manamarika. Tena ratsy tokoa ny tsy hahombiazany, na mahalana loatra, hanohanana indray ny mpanao ratsy eo amin'ny fiarahamonina.
Nefa ao ambadiky ny "mpiendaka" dia manafina lehilahy iray izay manana ny fahaizany sy ny zava-bitany manan-danja, tahaka ny ao amin'ny Ndebele. Ny fahadisoantsika, mety ho lasa tsara kokoa ve izy ireo raha toa ka ho sarobidy, fa tsy hoe meloka izy ireo? Sarotra ny mahafantatra raha tsy miezaka.
Mba hamaranana dia avelao aho hampiditra ny fiarahaban'ny Ndebele, izay feno olombelona:
Eo am-pilalaovanay salama dia miteny hoe "sawubona" ​​- mankasitraka anao aho, manaja anao aho, manan-danja aminao aho. Ny valiny dia "sikhona" - noho izany dia misy aho ho anao.
Handika amin'ny fiteninao
Tsindrio eto raha hanakatona ity hafatra ity!
Te hanoratra amin'ity tranokala ity ve ianao?
Tsindrio eto raha handefa lahatsoratra koa ...
Midira ao amin'ny mpandray anjara amin'ny 21k Facebook!
Tsindrio eto raha hanaraka anay koa ...
Midira ao amin'ny mpangataka Twitter 2.7k!
Midira ao amin'ny Mpanolotsaina LinkedIn 29!